Atụmatụ Atụmatụ 5 iji bulie ndenye ọpụpụ gị maka ndị ahịa. | Martech Zone
Atụmatụ Atụmatụ 5 iji bulie ndenye ọpụpụ gị maka ndị ahịa.
Dabere na Statista, na 2016, mmadụ nde 177.4 ji ngwaọrụ mkpanaka zụọ ahịa, nyocha na ịchọgharị ngwaahịa. Ọnụ ọgụgụ a na-atụ anya iru ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde 200 site na 2018. Na akụkọ ọhụrụ nke emere Adreesị zoro na gbahapụrụ ụgbọ ala eruola ọkara nke 66% na US.
Ndị na-ere ahịa ọnlaịnụ na-anaghị enye nnukwu ahụmịhe mkpanaka nwere ike ịhapụ azụmaahịa. Ọ dị mkpa na ha ga-echekwa ndị na-azụ ahịa ihe ha na-eme site na usoro ndenye ọpụpụ niile. N'okpuru ebe a bụ ihe ndị na-ere ahịa 5 nwere ike ime iji bulie ụdị weebụ maka ndị na-ere ahịa mkpanaka.
Jiri Ogwe Ọganihu - Site na ikwe ka ndị ahịa gị hụ akụkụ nke usoro ndenye ọpụpụ ha mechara na ihe ka ga-abịa, ọ bụghị naanị na ị na-ewepu nkụda mmụọ, na-eme ka ha mara ogologo oge ọ ga-ewe, mana ị na-ahapụkwa ha ka ha kwadebe maka nzọụkwụ ọzọ . Nke a na-enyere ha ohere inweta nkọwa ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ akwụkwọ onyinye na njikere.
Obere njehie nwere -dị-N'ihu Technology - Mezu ụdị ịntanetị nwere ike iri oge ma dịka Baymard Institute si kwuo, nkezi agbahapụ ụgbọ ala bụ 69.23% n'ihi usoro ndenye ego dị mgbagwoju anya. N'elu nke a, Mobile Commerce Daily kwuru n'oge na-adịbeghị anya na 47% hapụ ịzụrụ mCommerce n'ihi na usoro ndenye ego dị ogologo. Otu ụzọ dị mma iji belata oge na mbọ na ndenye ọpụpụ bụ site na itinye ngwa ọrụ nkwado adreesị smart na-enye ndị ahịa obi ike na ngwugwu ha na-abịa na oge na njehie-free. Ọ na - enyere aka izere ịhapụ ịgba ụgbọ site na ime ka ndị ahịa lekwasị anya na ịmecha usoro ndenye ọpụpụ.
Jiri Ubi-ahaziri na aha-elu-- Debanye aha aha n'elu ụdị mpaghara na-adịkarị irè karịa ịdebe ha n'akụkụ ubi ebe ọ dị mfe ilele na ngwaọrụ mkpanaka. Nke a na - ewepụ mkpa ọ dị ịpịgharị ma ọ bụ mbugharị. Ọ dị mkpa ijide n'aka na aha akara, na-enye ndị ahịa ohere ịghọta ozi ha chọrọ ịbanye. Enwere ike ịmewanye nke a site na mgbakwunye nke ihe atụ, nke nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma mgbe ịchọrọ usoro a kapịrị ọnụ, dịka MM / DD / YY.
Nwee oke ahụ - Anyị niile maara na nha ihuenyo ekwentị nwere ike ịbụ nsogbu mgbe ụfọdụ. Nke a bụ eziokwu karịsịa mgbe ị na-abanye nkọwa na mpempe akwụkwọ weebụ, ma nwee ike ibute mmejọ, ma ọ bụ na ịpị njikọ ndị nwere ike wepụ anyị na ndenye ọpụpụ. na-ekwu okwu banyere okwu a, na ịhụ na ndị na-azụ ahịa nwere ọmarịcha ahụmịhe ndị ahịa, ma ha na-azụ ahịa site na ekwentị ma ọ bụ desktọọpụ. Enwere ike ịme nke a site na ịmegharị ụdị mpempe akwụkwọ na bọtịnụ maka ogo nha ihu igwe na-akpaghị aka. ụdị na ubi nke ọ bụla akara nke adreesị. Mpempe akwụkwọ na-adị mfe karịa na -edenyeghị nsogbu n'ihi ya.
Ẹkedori kiiboodu dị mkpa - Gụnye àgwà ziri ezi na koodu HTML iji nweta kiiboodu dabara adaba maka usoro ntinye. Jide n'aka na akpado ubi ahụ nke ọma iji belata ibu ihe na-emetụta uche ma mee ka usoro ịbanye ozi dị nro. Ndụmọdụ ọzọ bụ ịkwụsị ihe nchọgharị ekwentị site na idozi okwu na akpaaka. Nke a dị mkpa na ọnọdụ ebe, dịka ọmụmaatụ, anaghị amata aha n'okporo ámá dịka okwu ziri ezi.
Tags: ederedeazụmahịaụgbọ ala mkpanakandenye ọpụpụ ekwentịngwa ahiaecommerce ekwentịmobile anabatamobile ihuenyo sizeụgbọ ibu azụmahịa mobileOgwe ọganihunha ihuenyoelu-kwekọọ n'ubiteknụzụ na-aga n'ihu
Tom Mucklow na-eduga na Adreesị Ndị otu na-enye azịza zuru oke ma dị irè maka ịzụ ahịa n'ịntanetị na ndọtị iwe na US Nkọwa okwu nkwenye adreesị na-ebuli ma na-eme ka usoro ndenye ọpụpụ maka ndị na-ere ahịa n'ịntanetị na ndị ahịa ha site na iji ozi adreesị na-akpachapụ anya, na-emechi nsonaazụ na igodo ọ bụla, ma na-ekwenye. ezi adreesị data maka ihe karịrị mba 240 gburugburu ụwa. Dịka onye ndu adreesị, Tom na-arụ ọrụ iji gosipụta nchekwa ego, ahụmịhe onye ọrụ, yana uru ogo data nke teknụzụ nyocha adreesị amụma na azụmaahịa gafere US.
Zuru ezu ™: Ahịa obe-ahia site na Ntugharị, Shozụ ahịa, site na Mmezu